သက်ဝေ: အနေချောင်အောင် ရွှေတောင်ကို စားပါ…
အနေချောင်အောင် ရွှေတောင်ကို စားပါ…
စာရေးရမှာ ပျင်း… စာဖတ်ရမှာ ပျင်း… အိမ်ရှင်းရမှာ ပျင်း… အိပ်ရာထရမှာ ပျင်း… အလုပ်သွားရမှာ ပျင်း… ပျင်းပုံ ပျင်းနည်း အစုံအလင်နဲ့ ပျင်း… သီချင်းထဲကလိုပဲ… ကိုယ့်မှာ ပျင်းရမှာတောင် ပျင်း… ဆိုတာ တကယ်ပါပဲ…။ အဲဒီလို ပျင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း နေ့စဉ် မလုပ်မဖြစ်တွေကိုတော့ ပျင်းပျင်းနဲ့ လုပ်နေရာတာပါပဲ…။ အဲ… မလုပ်လို့ ရတာတွေ မလုပ်ပဲထားတဲ့အထဲမှာ ထမင်းဟင်း ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ မချက်တာ တခု ပါနေတယ်…။ သုံးယောက်သား ပျင်းပျင်းနဲ့ အဆင်ပြေသလို သင့်တော်သလို အလွယ်တကူ စားနေတာ… ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ချက်စားဖို့ကို ပျင်းနေတာ…။ ချက်ရမှာ လုံးဝ ပျင်းတဲ့နေ့တွေမှာ အပြင် ထွက်စား… အဲဒီ့ထက် ပိုပျင်းးလာရင် Delivery မှာစား… အဲလိုနဲ့ နေလာတာ တပတ်လည်း မက… နှစ်ပတ်လည်း မက… အဲဒီလိုနဲ့….
အဓိက ကတော့ အပြင်စာတွေ စားရင်း အရမ်း ငြီးငွေ့လာတာက စတယ်…။ ဖဘမှာ တင်ထားတဲ့ စားစရာပုံတွေ လိုက်ကြည့်ရင်းက ဒီနေ့တော့ တခုခု ချက်စားမှ ဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီး… စားနေကျ ချက်နေကျ မဟုတ်တဲ့ ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲကို ချက်ဖို့ တွေးလိုက်ပါတယ်…။ ကဲ… လာလေရော့… “အနေချောင်အောင် ရွှေတောင်ကို စားပါ..” လို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကာရန်ရှာပစ်လိုက်တယ်…။ ပြီးတော့ အခုလို ပိုစ့်တပိုစ့်ရေးပြီး ဆားချက်ဖို့ တွေးမထားမိလို့ ချက်နည်း အဆင့်ဆင့်၊ ပြင်ဆင်နည်း အဆင့်ဆင့်ကို ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်မထားဖြစ်တာ တွေးရင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရင်း ဒီစာကို ရေးပါတယ်….
ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ အတွက် အဓိက လိုတာကတော့ နူးညံ့တဲ့ ခေါက်ဆွဲ အလုံးသေးသေးလေးတွေ ၊ ကြက်သား အသား၊ ကြက်ရိုးနည်းနည်းနဲ့ အုန်းနို့ပါ။ ကျန်တာတွေကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကြက်သားဟင်းချက်ဖို့ ဆီ၊ ငရုတ်သီး အရောင်တင်မှုန့် ကြက်သွန်နီ… နောက်ပြီး ခေါက်ဆွဲထဲ ထည့်စားဖို့က ပဲမှုန့် အကျက်၊ သံပုရာသီး၊ နံနံပင်၊ ကြက်သွန်နီ ပါးပါးလှီး၊ ငရုတ်သီး အလှော်မှုန့် နဲ့ ခေါက်ဆွဲကြွပ်ကြော်…။ မုန့်ပွဲပြင်တဲ့အခါ ပိုလှအောင် ကြက်ဥပြုတ်ပြီး ပါးပါးလှီးထည့်ရင်လည်း ရသေးတယ်…။
ပထမဆုံး ကြက်ရိုးကို ဆား အချိုမှုန့် ငန်ပြာရည်နဲ့ နယ်ပြီး ပြုတ်တယ်…။ နောက်ပြီးတော့ ကြက်သား အသားကို သေးသေးလေးတွေ တုံး၊ ဆား အချိုမှုန့် နယ်ပြီး ဆီနည်းနည်း၊ ကြက်သွန်နီ အနှစ် များများ ကို ငရုတ်သီး အရောင်တင်မှုန့် (အရောင်လေးပါတယ် ဆိုရုံ) နဲ့ ဆီသတ်ပြီး ချက်ပါတယ်…။ ကြက်သား ဆီသတ်ချက်ရင်း သကြား တဇွန်းလောက် ထည့်ပါတယ်။ ကြက်သား တော်တော်လေး ကျက်တော့ ခုနက ပြုတ်ထားတဲ့ ကြက်ရိုးပြုတ်ရည်ကို ထည့်ပါတယ်။ ဆီနည်းနည်း၊ အရည် ကျဲကျဲလေးနဲ့ ကြက်သားဟင်း ချိုချိုလေးပေါ့...။ ဟင်းပိုလှသွားအောင် ကြက်သွန်နီ အရွယ်တော်အလုံးလေးတွေကို လေးစိတ်စိတ်ပြီး အလွှာ အလွှာလေးတွေ ခွာပြီး ထည့်ပါတယ်…။
အုန်းနို့ရည်ကို နည်းနည်း ပြစ်လာအောင် မီးအေးအေးနဲ့ ကြိုပါတယ်…။ မကြိုခင် အုန်းနို့ရည် အနည်းငယ်ကို ဖယ်ထားပြီး ခုနက ကြက်သားဟင်းထဲ ထည့်ပါတယ်…။ ဟင်းကို အပေါ့အငန် မြည်းပြီးရင် စားလို့ရပါပြီ…။
ခေါက်ဆွဲအတွက်ကတော့ ဒီမှာ အလွယ်တကူ ၀ယ်လို့ရတဲ့ White Japanese Noodle ဆိုတဲ့ ခေါက်ဆွဲအချောင်းလေးတွေ သုံးပါတယ်။ သူက နူးလည်း နူးညံ့ပြီး ပြုတ်ရတာလည်း အချိန် ငါးမိနစ်လောက်ပဲ လိုပါတယ်။ ရေနွေး ဆူဆူထဲကို ခေါက်ဆွဲအချောင်းလေးတွေ ထည့် ပြုတ်… သုံးမိနစ်လောက်မှာ ခေါက်ဆွဲကြွပ်ကြော် ကြော်ဖို့အတွက် နည်းနည်း ဆယ်ယူပြီး ရေစစ် ထားပါတယ်…။ ကျန်တာတွေကိုတော့ နှစ်မိနစ် သုံးမိနစ်လောက် ဆက်ပြုတ်ပြီး ရေအေးလောင်း အအေးခံပြီး ရေစစ်ထားပါတယ်…။ ခုနက ဖယ်ထားတဲ့ သုံးမိနစ် ပြုတ်ပြီးသား ခေါက်ဆွဲတွေကို ဆီများများထဲမှာ အကြွပ်ကြော်ပါတယ်…။
ကြက်သားဟင်းရော ခေါက်ဆွဲရော အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါ မုန့်ပွဲပြင်ဖို့ အတွက် ပဲမှုန့်အကျက်၊ နံနံပင်၊ သံပုရာသီး၊ ငရုတ်သီး အလှော်မှုန့်၊ ကြက်သွန်နီ ပါးပါးလှီး... နောက်ပြီး ခုနက ချက်ထားတဲ့ အုန်းနို့ချက်… ခေါက်ဆွဲကြွပ်ကြော်… ကြက်ဥပြုတ် ပါးပါးလှီးတွေနဲ့… အခုလို လှပပြီး စားချင်စရာ ကောင်းတဲ့ အနံ့ အရသာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့… အနေချောင်တဲ့ ရွှေတောင် တပွဲ ရလာပါတော့တယ်…။
အဲဒီလို အနေချောင်တဲ့ ရွှေတောင်ကို တချို့က အရည်များများနဲ့ စိုစိုရွှဲရွှဲလေး စားကြသလို တချို့ကျတော့လည်း အရည်နည်းနည်းနဲ့ ပဲမှုန့်နဲ့ အသုပ်ဆန်ဆန် စားတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို အသုပ်စားတဲ့သူတွေအတွက် အခုနက ကြက်ရိုးပြုတ် အရည်ကို ဟင်းချိုလုပ် ကြက်သွန်မြိတ်လေး ဖြူးပြီးတော့ တည်ခင်းနိုင်ပါတယ်…။
ကဲ… မောင် ညီမလေးတို့ရေ… ဒီနေ့တော့ ဒီမျှပါပဲကွယ်…
ပျင်းလို့ရေးတဲ့စာ ဆိုပေမယ့် စာဖတ်သူတွေအတွက် အရသာ ရှိတဲ့ စာတပုဒ်တော့ ဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်… ခိခိခိ
Posted by သက်ဝေ at 5:10 PM
Labels: Sharing, စားဖွယ် သောက်ရာ
မြသွေးနီ June 12, 2013 at 5:53 PM
သုံးပွဲလောက်စားမှ ၀မှာဆိုတော့ အနေချောင်မဲ့ပုံတော့မရှိဘူး။ ဘိုက်တော့ ပြည့်အင့်သွားမယ်။ စားပြီးပြီ။ အအီပြေသံပုရာရည်လေး ဖျော်သောက်လိုက်ဦးမှပဲ... :)
ခင်မင်းဇော် June 12, 2013 at 6:40 PM
အစားအသောက်ထဲ အတော်များများ ကြိုက်ပေမယ့် ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲမကြိုက်မိဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲကို မသိဘူး။ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲတော့ အရမ်းကြိုက်ပြီး ဆင်ဆင်တူတဲ့ ရွှေတောင်ကို မကြိုက်မိတာ စဉ်းစားမရတဲ့ ပုစ္ဆာ...။
ညီလင်းသစ် June 13, 2013 at 5:20 AM
နောက်ဆုံးစားခဲ့တာ ဘယ်တုန်းကပါလိမ့် ဆိုပြီး မမှတ်မိတော့တဲ့ အစားအသောက်တွေ ထဲမှာ ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲလည်း ပါတယ်၊
အနေချောင်မယ့် ရွှေတောင်ကို ကြည့်ပြီး သွားရည်တစ်ထောင် ကျသွားပါကြောင်း....။း))
Anonymous June 13, 2013 at 8:52 AM
ponyate June 13, 2013 at 11:31 AM
ပျင်းတယ် အစ်မ လုပ်မစားချင်ဘူး။ စာတိုက်ကနေ ပို့လိုက် :p
ဇွန်မိုးစက် June 13, 2013 at 1:34 PM
ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ စားဖူးတဲ့အကြိမ်အရေအတွက်ကို လက်ချိုးရေကြည့်ရင် လက်ငါးချောင်းတောင် မပြည့်ဘူးထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကြိုက်တယ်။း)
နေ့လည်စာ စားပြီးမှ လာဖတ်လို့ ခံသာသွားတယ်။ :D
မိုးငွေ့........ June 13, 2013 at 4:41 PM
အနံ့လေးတောင်ရလာသလိုပဲ မစားရတာကြာပြီ ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ ကြိုက်၏
sosegado June 14, 2013 at 9:07 PM
တန်ခူး June 21, 2013 at 10:38 PM
စားချင်စရာလေး. တခါမှလုပ်မစားဖူးပါ. လုပ်စားကြည့်မယ်သက်ဝေရေ
တိမ် ပျောက် သူ . . .
ကြက်ခြေခတ်တို့၏ နောက်ကွယ်မှ လှပသော တေးတပုဒ်
အင်္ဂလန်သွား တောလား - ၃ - မနက်မိုးလင်းခါနီး အိမ်မက်မက်တယ် မှောင်မဲအလုံပိတ်ထားတဲ့ အခန်းထဲမှာ အသက်ရှူမဝဖြစ်နေတယ်။ အခန်းအပြင်ထွက်မှဆိုပြီး ထွက်လိုက်တော့ နဖူးနဲ့ ကုတင်ဘောင်နံရံ ဆော...
ဆောင်းယွန်းလ – “အမေရိကန်ဖဲဝိုင်း” - ဆောင်းယွန်းလ – “အမေရိကန်ဖဲဝိုင်း” (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၉ အစိုးရက ဖဲဒိုင်ကိုင်ပြီး ပြည်သူက ထိုးသားတွေဖြစ်တယ် ဒီဖဲဝိုင်းကြီးထဲမှာ ဒိုင်က ဖဲလိမ်ရိုက်ြ...
ရန်ကုန်စတိုင် ခေါက်ဆွဲကြော် - ခေါက်ဆွဲကြော်ကို အားပေးတဲ့သူများလို့ ကြော်နည်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အမှန်ကတော့ ရန်ကုန်က တရုတ်ဆိုင်ေတွမှာလို မျိုး ခေါက်ဆွဲကြော်ဖြစ်ဖို့ဆို လျှို့ဝှက်ချက်...
နွေဦး(၉)..... - နွေဦးတစ်ခါရောက်ခဲ့ပြန်ပြီ အိန်ဂျယ်.......... ကမ်းခြေကို ဒီလိုထိုင်မကြည့်တာဘယ်လောက်ကြာခဲ့ပြီလဲ.... မင်းနဲ့မဆုံဖြစ်တော့တာလဲ ဘယ်လောက်ကြာခဲ့ပြီလဲ .....(ဘ...
လူတယောက်ရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာအစပျိုးခြင်း - လူတယောက်ရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာအစပျိုးခြင်း ~ လူတယောက်ရဲ့ Personality လို့ ဆိုလိုက်ရင် ကျွန်မအတွက်တော့ ခဏအတွင်းမှာ မြင်လိုက်ရတဲ့ အပေါ်ယံအသွင်အပြင် စမတ်ကျသေသပ်...
ထိုင်းစာပို့သမားလေးနဲ့ မြန်မာအိမ်အကူလေးတို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း - ထိုင်းစာပို့သမားလေးနဲ့ မြန်မာအိမ်အကူလေးတို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း ( စာရေးသူ သူဌေးမ အပျိုကြီး-- ဘာသာပြန်သူ မောင်မျိုး) ** အိမ်ကညီမလေး( အိမ်အကူ) က စာတိုက်ကလာ...
မင်္ဂလသုတ် (၁၀) - The Virtuous Person, The Wise Person and The True Person - အရင်ပို့စ်တခုမှာ သူတော်ကောင်းဆိုတာ ဘယ်လို လူမျိုးလဲ ဆိုတာကို ရေးခဲ့ပြီး သရဘင်္ဂဇာတ်က သူတော်ကောင်း အင်္ဂါကို ထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ သရဘင်္ဂဇာတ်မှာ ဖြေထားတဲ့ သီလရှိသူ၊ ပည...
Burmese Zodiac Animal at Thursday Corner - ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ လူရှင်းအောင်ဘေးလေးမှာ အသာရပ်စောင့်နေတုန်း အသံတွေ.. အသံတွေ.. တစ်ယောက်က မေးတယ်.. ဒါဘာအကောင်လဲတဲ့ တစ်ယောက်က ဖြေတယ်.. ပူး.. နောက်တစ်ယောက်က ဖြေ...
မူးစုပဲစု - မြတ်ကြည်က ငွေရှာတာထက် စုဆောင်းတဲ့ဘက် အားသန်တဲ့သူမျိုးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြင်မိတယ်။ တကယ်တော့အပင်ပန်းခံရှာထားတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သနားလို့ စုဖြစ်တာပါ။ အလေ့အ...
Shallow (ပါဠိ version) - ဒီနေ့ မနက်စောစော Golden Globe 2019ပွဲမှာ original songဆုရတဲ့ Lady Gagaနဲ့ Bradley Cooperတို့ရဲ့ ရုပ်ရှင်တေးတစ်ပုဒ်ပါ။ A Star Is Bornရုပ်ရှင်ကိုတော့ မကြည့်...
Good things about my little girl Yoon - ယွန်းနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ကောင်းကွက်လေးတွေ ပြောရရင် အခုချိန်အထိ ကျောင်းပျော်လေး ဖြစ်နေတာပဲ။ ဘယ်သင်တန်း ဘယ်ကျူရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ် မသွားချင်ဘူး ဆိုတာ မရှိဘူး။ ကျောင်းသွ...
ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေး လိုက်စားပေး - *လူသားတို့အတွက် မရှိမဖြစ် ကျောက်ကပ်* ခန္ဓာကိုယ် ကြီးကောင်းစွာ အသက်ဆက်နိုင် ဖို့အတွက် ကျောက်ကပ်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ လွန်စွာ အရေးပါလှ ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အခြားကလီစ...
ကိုယ့်အသည်းလေး အပြစ်ကင်းစေဖို့ - ဒီလိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းလှတဲ့အရည်တစ်ခွက် သောက်ပေးလိုက်တာနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာထဲက အသည်းလေးကို အဆိပ်အာနိသင်တွေကင်းစင်၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားစေရုံတင်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်အလေးချိန...
Baby Y's birth story - Afteralong while, I have some spare time to sit down and blog about my baby Y's birth story. Memory will gradually fade away, blogging is the best way to...